यसरी मनाइन् प्रियंकाले ३० औं जन्मदिन : को-को थिए विशेष पार्टीमा ? « Mazzako Online
यसरी मनाइन् प्रियंकाले ३० औं जन्मदिन : को-को थिए विशेष पार्टीमा ?
अहिलेकी व्यस्त नायिका प्रियंका कार्कीले आफ्नो ३० औं जन्मदिन विशेष रुपमा मनाएकी छिन् । फागुन १६ गते, सोमबार प्रियंकाले आफ्ना ‘फेवरेट’ सँग जन्मदिनको केक काटिन् । उनले आफुसँग एकदमै नजिक रहेका व्यक्तिहरुलाई मात्रै वर्थ डे सेलिव्रेसनमा निम्ता दिएकी थिइन् ।
प्रियंकाको ३० औं वर्थ डेमा सेलिव्रेटी सञ्चारकर्मी भूषण दाहाल, बैङ्कर अनिल शाह, निर्देशक विकास आचार्य, दिपाश्री निरौला, निर्माता तथा कलाकार दिपकराज गिरी, नायिका निशा अधिकारी, ‘सुन्तली’ निर्देशक भाष्कर ढुंगाना, निर्देशक मिलन चाम्स, भिजे एंव एक्टर सुरजसिंह ठकुरी, पुर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बा र प्रियंका प्रिय बाल कलाकार अनुभव रेग्मी उपस्थित थिए ।
यस्तै निर्देशक मिलन चाम्स, भिजे तथा मोडल साहना बज्राचार्य, ‘चपली हाईट २’ एक्टर आयुष्मान देशराज, पुर्व मिस नेपाल तथा प्रियंकाकी बुहारी जेनिशा मोत्तान, कोरियोग्राफर रेनेशा वान्तवा राई, डिजाइनर युवी थापा पनि प्रियंकाको वर्थ डेमा उपस्थित थिए । वर्थ डेको सम्पूर्ण व्यवस्थापन निर्देशक तथा प्रियंकाको मिल्ने साथी निलु डोल्मा शेर्पाले गरेकी थिइन् ।
पाँच वर्षपछि नजिकका व्यक्तिसँग केक काटेको बताउँदै प्रियंकाले आफुलाई माया गर्ने सबैप्रति कृतता व्यक्त गरिन् । भावुक हुँदै प्रियंकाले भनिन्, ‘मलाई हरेकले केही न केही सिकाउनु भएको छ । यति धेरै माया गर्ने मान्छेहरु पाएकोमा म आफुलाई निकै भाग्यमानी ठान्छु ।’ तस्बिर : उद्धव रसाईली ।